Global Voices teny Malagasy · 15 Jona 2017
Tantara tamin'ny 15 Jona 2017
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 15 Jona 2017
Miady amin'ny vehivavy amin'ny lafiny roa fara fahakeliny ny manampahefana Iraniana. Andaniny, nalefa tany am-ponja ary nenjehina ny mpikatroka vehivavy nanao hetsi-panoherana ho amin'ny fitovian-jo. Ankilany, manohy ny famoretana manerana ny firenena ny polisy Iraniana izay mikendry ny hankatoavan'ny vehivavy ny fehezan-dalànan'ny fomba fitafy Islamika ao Iran.
Nanohy ny politikany momba ny famoretana mihatra amin'ireo mpikatroka ny zon'ny vehivavy sy ny Silamo Sufi ny governemanta Iraniana tato anatin'ny herinandro vitsivitsy. Nosamborina andro vitsy lasa izay i Maryam Hosseinkhah, mpikatroka ny zon'ny vehivavy sady mpanao gazety, ary noravan'ny mpitandro ny filaminana ny Foiben'ny Silamo Sufi.
Nanambara ny Minisitra Mahmoud Vaezi misahana ny TIC hoe tena nanatsara tamim-pahombiazana tokoa ireo fomba fifehezana ny aterineto i Rouhani ary maro ireo sehatra nakatony
Azia Atsinanana 15 Jona 2017
Aiza i Ely Ishai sy Ravitz isaky ny Asabotsy, andro izay handehanan'ireo Isiraeliana marobe eny an-tsena? Fotoana izao hisafidianana ny fampiharana ny lalàna araka ny tokony ho izy, na ny tsy firotsahana an-tsehatra mahazatra.